Wararka Maanta: Isniin, Sept 17, 2012-AMISOM oo raalli-gelin ka bixisay shil uu mid ka mid ah gaadiidkeeda ciidamada uu ku dilay wiil dhallinyaro oo ah Soomaaliyeed
AMISOM oo raalli-gelin ka bixisay shil uu mid ka mid ah gaadiidkeeda ciidamada uu ku dilay wiil dhallinyaro oo ah Soomaaliyeed Isniin, September 17, 2012 (HOL) — Taliyaha ciidamada Midowga Afria ee AMISOM, Jen. Adrew Gutti ayaa raalli-gelin ka bixiyay shil uu mid ka mid ah gaadiidkooda ku dilay wiil dhallinyaro ah shalay oo Axad ahayd, xilli ay socotay munaasabad lagu caleemo-saarayay madaxweynaha Soomaaliya, Xasan Sheekh Maxamuud.
Jen. Gutti ayaa sheegay in AMISOM ay markii uu shilku dhacayba ay la xiriirtay booliiska Soomaaliya ayna ku wargeliyeen in gaadiidkooda mid ka mid ah uu dilay wiilka oo magaciisa lagu sheegay Cali Maxamuud Goobdoon.
"Waan ka xunnahay shilkan dhacay. Waxaana qoyska uu ka baxay u diraynaa tacsi," ayuu yiri Jen. Gutti, iyadoo goobjoogayaal ku suganaa haka uu shilku ka dhacay ay sheegeen in gaarigu uu wiilka Soomaaliyeed ka maray madaxa iyo dhabarka.
Darawalkii waday gaariga shilka geystay ayaa la sheegay inuu argagaxay markii uu shilku dhacay, waxaana AMISOM ay sheegtay in baaritaan lagu sameynayo sida uu ku dhacay shilkan uu naftiisa ku waayay wiilka Soomaaliga ah.
"Inkastoo ay dhib badan tahay in gaadiidka waaweyn ay dhexmaraan Muqdisho, haddana aad u yar shilalka dhaca," ayuu yiri Jen. Gutti oo hadalkiisa inay dadka jidadka waaweyn goynaya ay kula talinayaan inay si taxadar badan muujiyaan. Ma ahan markii ugu horreysay oo gaadiidka AMISOM ay dad shacab ah ku jiiraan Muqdisho, sidoo kalena ay askartoodu toogasho ku dilaan dad shacab ah, balse inta badan saraakiisha AMISOM way ka hadlaan shilalkan oo kale, iyagoo sheega in baaris lagu sameynayo sidii ay u dhaceen.
Madaxweynaha Somaliland oo dhagax dhigay mashruuc ballaadhan oo agoomaha lagu caawinayo oo laga hirgalinayo magaaladda Hargeysa 9/17/2012 11:53 AM EST
Isniin, September , 17, 2012 (HOL)- Madaxweynaha Somaliland Axmed Maxamed Maxamuud (Siilaanyo) ayaa dhagax dhigay mashruuc balaadhan oo loo dhisayo xarun lagu daryeelayo Caruurta agoomaha ee Somaliland. Xubno cusub oo dhowaan kusoo biiray golaha wasiirada Puntland oo maanta la dhaariyey. 9/17/2012 11:52 AM EST
Isniin, September 17, 2012 (HOL) — Kooxo bastoolado ku hubeysan ayaa xalay ku dilay degmada Shibbis ee gobolka Banaadir wiil dhalinyaro ah oo lagu magacaabi jiray, Zakariye Maxamed Maxamuud kaddib markii ay ku weerareen maqaayad uu ka casheynayay. Dagaallo khasaare badan geystay oo ka dhacay inta u dhexeysa Magaalada Kismaayo iyo Degmada Afmadow ee Gobolka Jubbada Hoose 9/17/2012 2:51 AM EST